जिल्ला अदालत काभ्रेको परिसरबाट फरार थुनुवा अझै प क्राउ परेनन्, प्र हरीमाथी नै शंका ! – मिलिजुली खबर
जिल्ला अदालत काभ्रेको परिसरबाट फरार थुनुवा अझै प क्राउ परेनन्, प्र हरीमाथी नै शंका !
जिल्ला अदालत काभ्रेको परिसरबाट फरार भएका थुनुवा एकसाता पुग्नै लाग्दा समेत फेला परेका छैनन् । चोरी तथा डाँका मु द्दामा प क्राउ परी अदालतको आदेशपछि पूर्पक्ष थुनामा रहेका काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का सुनिल वाईबा लामा गएको बुधबार अदालत परिसरबाटै भागेका थिए ।
वाईबा २०७७ मंसिर ७ गते काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर ४ तामाघाटमा रहेको रञ्जन लामिछानेको पसलका विभिन्न ब्राण्डका रक्सी चोरी गरेको आ रोपमा प क्राउ परेका थिए । २०७७ पुस १५ गते पूर्पक्षका लागि का रागार चलान गरिएका वाईबाको मंगलबार र बुधबार अदालतमा वकपत्र चल्दै थियो । बुधबार दिउँसो वकपत्रका लागि अदालत पुर्याइएका वाईबा अदालतको क्यान्टिनबाटै भागेका थिए ।
वाईबाले आफुसंगै अदालतको क्यान्टिनमा खाजा खान बसेका प्र हरीलाई झुक्याएर झ्यालबाट भागेको जिल्ला प्र हरी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ । वाईबा भागे लगत्तै जिल्ला प्र हरी कार्यालय काभ्रेले मातहातका सबै प्र हरी कार्यालयहरूलाई प क्राउ गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर प्र हरीको बाग्लो उपस्थित रहने ठाउँबाटै फरार भएका वाईबालाई कतिपयले भने प्र हरीले मिलेमतोमा भगाएको आशंका गर्छन् । काभ्रे प्र हरीले भने आफुहरूको संलग्नता स्वीकारेको छैन् ।
उक्त घ टनाको निष्पक्ष छानविनका लागि भन्दै सहाय प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमर दिप सुनुवारको नेतृत्वमा छानविन समिति समेत गठन गरिएको छ ।
काभ्रेका गोलेको उपचारका लागी मलेशियाबाट आर्थिक सहयोग
सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न निर्वाचन कार्यालयको उर्दी